February 2022 – Alanzayar
ဆက်လက်အသက်ရှင်ရန် ခွဲစိတ်ကုသမူ့တွေ ပြုလုပ်တော့မယ့် ကလေးအတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ဆက်လက်အသက်ရှင်ရန် ခွဲစိတ်ကုသမူ့တွေ ပြုလုပ်တော့မယ့် ကလေးအတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ခိုင်နှင်းဝေ ကတော့မိဘမဲ့ကလေးလေးတွေအတွက် ခိုင်”မိသားစု”ဂေဟာကိုလက်ရှိမှာ ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ ရင်ခွင်မဲ့ကလေးလေးတွေကို စောက်ရှောက်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ဂေဟာကိုလည်း (၇) ရက်သားသမီး အလှူရှင်များစွာကလည်း တတ်နိုင်သလောက် အလှူငွေများ ထည့်ကူပေး လျက်ရှိတာကိုလည်း ကြည်နူး ပီတိ ဖြစ်စွာတွေ့ရပါတယ် ။ ဒီနေ့မှာတော့ ခိုင်နှင်းဝေ …
ဘာကြောင့် ယောက်ျားအများစုဟာ မိန်းမတွေရဲ့စကားကို နားမထောင်ကြတာလဲ? ဘာကြောင့် ယောက်ျားအများစုဟာ မိန်းမတွေရဲ့စကားကို နားမထောင်ကြတာလဲ? ယောက်ျားအများစုဟာ မိန်းမတွေရဲ့စကားကို ဘာ့ကြောင့် နားမထောင်ကြတာလဲဆိုရင် ဒီအချက်တွေကြောင့်ပါ။ ၁။ မိန်းမတွေက စကားများလွန်းတယ်- သိပ်ကို အခြေခံကျတဲ့ အချက်က မိန်းမရဲ့ စကားများလွန်းတဲ့ အခြေခံဗီဇ ပါပဲ။ “ကျောပူတာပဲ ခံနိုင်မယ်။ နားပူတာတော့ မခံနိုင်ဖူး” ဆိုတဲ့ ယောက်ျားတို့ရဲ့ ဝသီ …
အားလုံးအတူတူသွားရမယ့်လမ်းဖြစ်တာကြောင့် အခုချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်နေတိုး
အားလုံးအတူတူသွားရမယ့်လမ်းဖြစ်တာကြောင့် အခုချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်နေတိုး အားလုံး အတူတူ သွားရမယ့် လမ်းဖြစ်တာကြောင့် အခုချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံး လုပ်ရမယ့်အရာကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်နေတိုး သရုပ်ဆောင်နေတိုးကတော့ အမိုက်စား သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားပါတယ်နော် သရုပ်ဆောင်နေတိုးကတော့ တော်လှန်ရေးကြီးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်က ပါဝင်ခဲ့ပြီး လမ်းထွက်ကာ …
လေတပ်အရာရှိတွေ CDMဝင်ပြီ လေတပ်အရာရှိတွေ CDMဝင်ပြီ video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … လေတပ်အရာရှိတွေ CDMဝင်ပြီ video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … လေတပ်အရာရှိတွေ CDMဝင်ပြီ video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … လေတပ်အရာရှိတွေ CDMဝင်ပြီ video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … လေတပ်အရာရှိတွေ CDMဝင်ပြီ …
ရှင်မဟာကဿပ၏ရုပ်ကလာပ်တော်အကြောင်း ရှင်မဟာကဿပ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အကြောင်း video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … ရှင်မဟာကဿပ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အကြောင်း video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … ရှင်မဟာကဿပ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အကြောင်း video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … ရှင်မဟာကဿပ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အကြောင်း video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … ရှင်မဟာကဿပ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အကြောင်း video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … ရှင်မဟာကဿပ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အကြောင်း video အောက်တွင်ကြည့်ရန် …
ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ရေသူမ တွေ့ရှိမှု ၅ ခု
ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ရေသူမ တွေ့ရှိမှု ၅ ခု ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ရေသူမ တွေ့ရှိမှု ၅ ခု video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ရေသူမ တွေ့ရှိမှု ၅ ခု video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ရေသူမ တွေ့ရှိမှု ၅ ခု video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး …
တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … video အောက်တွင်ကြည့်ရန် … တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ video အောက်တွင်ကြည့်ရန် …
႐ုရွား-ယူကရိန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ ေဆြးေႏြးေနပီ…
႐ုရွား-ယူကရိန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ ေဆြးေႏြးေနပီ… ႐ုရွား-ယူကရိန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ ယူကရိန္းမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို အဆုံးသတ္ဖို႔ ယူကရိန္းနဲ႔ ႐ုရွားကိုယ္စားလွယ္ေတြၾကား ညႇိႏွိုင္းမႈေတြ စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဘီလာ႐ုစ္သမၼတက သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ယူကရိန္း-ဘီလာ႐ုစ္နယ္စပ္ဂိုမယ္လ္ ေဒသမွာျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူကရိန္းနိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ႐ုရွားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ ဘီလာ႐ုစ္ကို ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စင္းနဲ႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး …
ညညည္းနက္တဲ့အထိ အိပ္ယာထဲအထိ ဖုန္းသုံးျခင္းရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ား…
ညညည္းနက္တဲ့အထိ အိပ္ယာထဲအထိ ဖုန္းသုံးျခင္းရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ား… က်န္းမာေရးပါရဂူႀကီးမ်ားရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ လူသားေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံး အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္ဟာ ည ၁၁ နာရီမွ မနက္ ၃ နာရီအတြင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီအဆိုကို ေဆးပညာရွင္မ်ားအားလုံးနီးကလည္း လက္ခံထားၾကပါတယ္။ ၁၁-၃ အတြင္း အနားမယူပဲ အလုပ္တစ္ခုခု လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ က်နး္မာေရးကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မယ္။ ခ်က္ခ်င္းမဟုတ္ေပမယ့္ ေရရွည္မွာ ဆိုးဝါးလာေစႏိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ …
မနက္ဖန္မွာထြက္မယ့္ ခ်ဲဂဏန္း(3D) တစ္ကြက္ထဲအပိုင္ေအာဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပီေနာ္ (ေပါက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္).1
မနက္ဖန္မွာထြက္မယ့္ ခ်ဲဂဏန္း(3D) တစ္ကြက္ထဲအပိုင္ေအာဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပီေနာ္ (ေပါက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္) ပထဦးဆုံးအေနနဲ႔ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ဂါထာအေၾကာင္းေလးဖတ္ၿပီး ႐ြတ္ဖတ္ေပးပါ…။ အစြမ္းထက္ျမက္တဲ့ ထီေပါက္ဂါထာ ေရွးက်မ္းရင္းတစ္ေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အစြမ္းထက္ျမက္တဲ့ ထီေပါက္ဂါထာ ျဖစ္ပါတယ္ ဂါထာရဲ႕အဓိပၸါယ္အတိုခ်ဳပ္က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွိစဥ္က ေကာ႑ေဝန မေထရ္ႀကီးသည္ ပထမစာေရးတံမဲကို အၿမဲတမ္း ေပါက္ခဲ့၏ ထို႔အတူ ကြၽႏ္ုပ္သည္လည္းဤသို႔ ျဖစ္ရပါေစသတည္း ဟု ဆိုထားပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းေပစာ တစ္ခုထဲမွာလည္း …
စ ၃လံုး ေနာက္ခံ စုိးေနာင္ဦးနဲ႔ ေမာင္ေမာင္ျမင့္ နားကားျပီ
AA ကေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာျ္ပီ